ANIO NO FOTOANA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 14, 2013 Laisser un commentaire sur ANIO NO FOTOANA
“Isika tsy maintsy manao ny asan’izay naniraka Ahy, raha mbola antoandro; avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona”. (Jaona 9: 4)
Sary iray mampahonena ihany no hita tao amin’ny trano fanangonan-tsary (‘musée’) iray, maneho fehezam-boninkazo ho an’ny olona maty (‘couronne’) izay mihantona amin’ny varavaran-kazo iray, ary mitondra izao soratra izao: “Izay tokony ho nataoko dia tsy vitako”. Tara loatra ny fifonan’izany olona izany.
Fakam-panahy ho antsika ny manemotra ny asa tokony ho nataontsika. Matetika isika no miteny hoe: ”Ataoko io rahampitso”, saingy indrisy tsy mety tonga ny ampitso. Tsy mety vita ny zava-dehibe nokasaintsika hatao. Avy eo misy zava-mitranga, fahafatesana ohatra, dia tsy vita izay tokony ho natao fa tara loatra. Fantatr’i Jesosy sy ny Apostoliny izany. Tsaroantsika ny Tompo niteny fa tsy maintsy manao ny asan’Andriamanitra Izy raha mbola antoandro. “Mihavàna faingana amin’ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao”
(Matio 5: 25). Tahaka izany koa no ilazan’I Paoly hoe: “Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo”. (Efesianina 4: 26). Paoly dia mampianatra ny olona ny tokony hanampiana ny hafa: “Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana.”(Galatiana 6: 10). Izao no fotoana mety mba hanampiana ny hafa.
Ny Kristiana no “taranaky ny izao anio izao”. Izao no fotoana tokony hibebahantsika amin’ny fahotantsika sy tokony hifaharantsika ao amin’i Kristy Jesosy, izay maty nisolo antsika mba hamelàna ny helotsika sy hanonerana ny fahotantsika. Hoy ihany Paoly: “Fa hoy Izy (Andriamanitra) : ‘Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao’; indro, ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena “.
(IIKorintiana 6: 2)
Eny ankehitriny izao no andro ampisehoam-pitiavana ho an’izay akaikintsika sy mamintsika, izao no fotoana tokony hanaovantsika soa.
Publié parfilazantsaramada juin 14, 2013 Publié dansUncategorized